Xaddid bogagga ku jira WordPress si aad ugu Baahantahay Soo Gal | Martech Zone
Xaddid Bogagga WordPress si aad ugu Baahantahay Soo Gal
Isniintii, September 28, 2009 Jimco, Oktoobar 11, 2013 Douglas Karr
Toddobaadkan, waxaan ku dhammeyn jirnay hirgelinta mowduuc caadiya oo ku saabsan goobta macmiilka waxayna codsadeen in aan dhisno nooc ka mid ah isdhexgalka halkaasoo bogagga qaarkood lagu xaddiday macaamiisha diiwaangashan. Markii hore, waxaan ka fikirnay hirgalinta plugins-ka sadexaad, laakiin xalkuna runti wuu fududahay.
Marka hore, waxaan nuqul ka soo qaadnay shaashadda bogga feyl cusub (magac kastaaba wuu fiicanyahay, kaliya sii wad kordhinta php). Xagga sare ee bogga, hubi inaad faallo ka bixiso bogga si aad uga dhex aragto tifaftiraha shaxanka magac ahaan:
Marka xigta, ka raadi khadka koodhka boggaaga ee soo bandhigaya waxa ku jira. Waa inay u egtahay sidan:
Hadda, waxaad u baahan doontaa inaad ku duubto lambar qaar khadkaas:
Macmiil Kaliya Waan ka xunnahay, waxyaabaha aad iskudayeyso inaad gaarto waxa ku xaddidan macaamiisha oo keliya.
Koodhku wuxuu ku bilaabmayaa hubinta fadhiga si loo arko haddii adeegsaduhu ku jiro boggaaga WordPress. Haddii ay galaan, waxa ku jira ayaa la soo bandhigayaa. Haddii aysan qorin, fariinta waxay sheegaysaa inaad isku dayeyso inaad gaarto waxyaabaha xaddidan.
Si aad u isticmaasho bogga, waxaad u baahan doontaa inaad doorato Macaamiisha Kaliya shaxanka bogga qaybta horumarsan ee xulashooyinka boggaaga (dhinaca dhinaceeda). Taasi waxay xaddidi doontaa bogga akhristayaasha soo galay.
Haddii aad jeclaan laheyd inaad runtii hesho, waxaad ku dari kartaa habka galitaanka iyo ka bixitaanka dhinacaaga sidoo kale:
">Ka bax /wp-login.php">Soo Gal Macaamiil
Tags: maamulahaqoraagaeditorqorteyla galiyay_inmacaamiishunuxurkaWordPress
Newsflash: Istaraatiijiyadda Weli Waa Muhiim
Sep 29, 2009 at 4: 13 AM
Qoraal wanaagsan… Waan layaabay in tan aan laga helin xulashooyinka Muuqaalka.
Sep 29, 2009 at 12: 45 PM
Taasi waa xalka dhalaalaya, Doug! Tusaale weyn oo ah helitaanka xalka fudud, laakiin wax ku oolka ah.
Sep 29, 2009 at 1: 33 PM
Boosto waxtar leh, tan. Tweet boggan. Waxaan qabaa su'aal in kastoo.
Ka waran haddii aad rabto inaad muujiso qayb ka mid ah bog-bog boggeeda dhammaan booqdayaasha, laakiin dhammaantoodna ay yihiin kaliya macaamiisha?
Sep 29, 2009 at 1: 50 PM
Taasi way fududaan laheyd - waad ku dari kartaa isla farsamada cinwaanka bogga oo asal ahaan waxaad oran kartaa… haddii (uusan jirin userid iyo bog aan u dhigmin magaca pagename) ka dibna cinwaanka cinwaanka bogga soo galida.
Jul 16, 2010 markay tahay 4:24 PM
xalka xarrago weyn! kaliya wixii aan u baahnaa, waxaan si dhab ah uga fiirsanayay dhismaha sistem login dibadeed.
Febraayo 21, 2011 saacadu markay tahay 1: 04 AM
Kani maahan isticmaale saaxiibtinimo dadka wax baranaya. Maahan saaxiibtinimo gabi ahaanba !!!!
Oktoobar 30, 2011 at 12:04 AM
Xaqiiqdii kama qorin tan maskaxda cusub. Waan ka xumahay Devs_mum!
Jan 16, 2012 saacadu markay ahayd 10:14 PM
Maahan adeegsi saaxiibtinimo laakiin taasi waa ok… Waxaan dareemayaa sida sawirrada qaar ee waxa aan u maleynayo in aan sameynayo ay caawin doonaan. Haddii kale… Waxaan iskudayaa uun alaab ilaa ay shaqeyso!
Oktoobar 11, 2013 at 1:40 AM
nuqul bogga.php, Magacaabi bogga2.php oo geli koodhka kor ku xusan, kaydso faylka, dib ugu soo celi mawduuca / mawduuca / wax kastoo loo yaqaan, u tag boostada ama bogga u beddelo bogga bogga hore bogga2.php. Looma baahna in la abuuro qaab / qaab bog cusub kaliya nuqul kan aad isticmaasho oo dib u magacaw. marka fullwidth.php waa fullwidth2.php sahal ah.
Jan 16, 2012 saacadu markay ahayd 11:57 PM
Waayahay kadib iskudayo badan kadib oo aan daawaday casharro kale oo internetka ah… Waxaan ogaaday in SAMAYNTA bogga cusub ee shaashaddu ay tahay arrinkayga. Mid baan ku sameeyaa tifaftiraha qoraalka waxaanan isku dayaa inaan u soo raro… xaggee? Xitaa ma aqaan meel aan aado. Uma muuqan karo inaan helo meeshan qarsoodiga ah ee aan u soo rarro!
Run, LaRocque! Waxaad ubaahantahay inaad haysato barnaamijka FTP oo aad uhesho galka websaydhkaaga mawduuca si aad feylka halkaas ugu geyn karto. Ma jirto qaab hadda lagu sameeyo iyada oo loo marayo shaashadda maamulka. Mid ka reeban ayaa noqon doonta inaad ku rakibto "Faylka Maamulaha" plugin kaas oo kuu ogolaanaya inaad sameyso faylal cusub. Ka taxaddar, in kastoo!
Agoosto 3, 2011 saacaddu markay ahayd 1:14 PM
Ama kaliya isticmaal - looma baahna in la raro sheyga isticmaalaha oo dhan.
Oktoobar 30, 2011 at 12:03 AM
Xaqiiqdi waad iska hubin kartaa in isticmaale gasho iyo in kale; si kastaba ha noqotee, habka kor lagu qeexay wuxuu ugu dambeyntii kuu oggolaanayaa inaad isticmaasho heerarka oggolaanshaha haddii aad jeclaan lahayd inaad u habeyso heerarka!
Hagaag, markaa waan qaniini doonaa… Sideed wax uga beddeli lahayd tan si aad ugu oggolaato hubinta rukhsadaha?
Aynu nidhaahno - weli waxaan dooneynaa inaan u oggolaano qof walba inuu abuuro username u gaar ah, oo uu ku qoro jawaabo.
LAAKIIN - waxaan kaliya ku siineynaa helitaanka bogga "Macaamiisha kaliya" kaliya kuwa isticmaala ee uu qeexay maamulku?
Febraayo 23, 2012 saacadu markay tahay 12: 22 AM
Douglas - Waxaan isticmaalay lambarkaaga - qaybta ugu badanna way shaqaysaa! Arrinta aan haysto ayaa ah in iskuxirka Logout uu ku laabanayo goob aan jirin. Xaqiiqdii waxaan isku dayay nambarro badan oo ereybixin ah oo laga helo hareeraha webka si loo sameeyo koodhka ka bixida. . . laakiin wali isticmaaluhu wuu sii jiraa oo soo noqoshadu waa //wp-login.php?redirect_to= “>log%20in%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX%
Wax fikir ah?
Waxay umuuqataa inay kaliya noqon karto markii koodhka laga soo guuriyay biraawsarkaaga, waxay ku dartay farabadan boosaska HTML, Ryan. Nuqul nambarka ku qor Notepad ama Textpad ka dibna ku nuqul qoraalkaaga si aad uga takhalusto waxyaabahaas.
Haa markaa tani waa dhab ahaan waxa aan u baahanahay inaan sameeyo laakiin hal su'aal ayaan qabaa. Haddii aysan ka mid ahayn macaamiisha, sidee baan u sameysan karaa sanduuq "soo gal" ama "rukumo" si ay u helaan waxa ku jira?
Waxaad ku dhejin kartaa xiriiri ka dib bayaanka kale meesha aan ku leenahay "Waan ka xunnahay" kor.
Oktoobar 11, 2013 at 1:44 AM
Waad ku mahadsan tahay lambarka. Dadku way iga xanaaqi doonaan, laakiin waxay u maleynayaan inay soo galaan markay wax uun doonayaan ma ogolaanayaan qof walba inuu si bilaash ah u helo sameynta feylasha si sahlan loo heli karo.
Jan 31, 2014 saacadu markay ahayd 11:43 PM
Waxay u egtahay in qaabkani ku xiran yahay afduub kalfadhi. Kukiyada soo galitaanka ayaa lagu dari doonaa inta ay ku sugan yihiin aagga aaminka ah laakiin maadaama wordpress ay u adeegto sidii buskud aan aamin ahayn, wali waa la adeegi doonaa haddii adeegsaduhu dib ugu noqdo qayb ka mid ah goobta oo aan la kaydin.
Febraayo 1, 2014 saacadu markay tahay 1: 35 AM
Tani maahan khawan, waxay adeegsaneysaa howlaha WordPress API - mana dhaafeyso wax nabadgelyo ah mana geli karto fadhiga ama cookie si toos ah.
Apr 12, 2015 at 4: 25 PM
aad ayaad ugu mahadsantahay isticmaalida hadii bayaanku sameeyo weel div hadii isticmaaluhu xubin ka yahay
xalkaagu wuu fiicnaa